Ogaden News Agency (ONA) – CIA oo Bin Salmaan Ku Eedeeysay Dilka Wariye Khaashuqji.
CIA oo Bin Salmaan Ku Eedeeysay Dilka Wariye Khaashuqji.
Posted by Dayr	/ November 18, 2018
Hay’ada Sirdoonka Maraykanka ee CIA ayaa shalay u gudbisay Trump, xogta ay hay’adaasi ka diyaarisay dilkii Suxufi Jamal Khashoggi ee ka dhacay Qunsuliyada Sacuudiga ku leeyahay Istanbul-Turkey 2dii bishii Oktober.
Sida ay qoreen xalay xili danbe jaraa’idka Washington-Post iyo New-York-Times ee dalkaasi Maraykanka oo soo xiganaya saraakiisha CIA, waxaa cadeyn loo hayaa in Maxamed Bin Salmaan Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga uu lahaa amarka lagu dilay Suxufiga Jamal Khashoggi oo u shaqeyn jiray jariirada Washington Post oo laga leeyahay dalka Maraynkanka.
Xukuumada Trump ee Maraykanka oo xidhiidh fiican la leh Boqortooyada Sacuudiga ayaa xiligan cadaadis lagu saarayaa inay go’aan adag ka qaadato dilkan walow Trump uu marar badan sheegay inuusan heynin cadeynmo dhameytirsan. Dowlada Turkiga ayaa ku wareejisay dhamaan xogtii ay heysay Sirdoonka Maraykanka iyo haweenayda hogaamisa CIA-da Gina Haspel oo bishii hore booqasho ku tagtay wadanka Turkiga.
Sirdoonka Maraykanka ayaa sheegay inay hayaan xog la xidhiidha in Safiirka Sacuudiga u fadhiya Maraykanka Khalid Bin Salman oo la dhashay Maxamed Bin Salman uu suxufiga telefoonka kala xiriiray una sheegay inuu Qunsuliyada Sacuudiga ee Istanbul ka doonto waraaqaha uu u baahnaa Suxufi Khashoggi oo doonayey inuu guursado haweenay u dhalatay dalka Turkiga. Khalid Bin Salman ayaa markii dilkan dhacay ka tagay dalka Maraykanka isagoona beeniyey inuu wax lug ah ku lahaa dilkaasi.
Sacuudiga oo illaa iyo hada sheegaya in Maxamed Bin Salman uusan waxna ka ogeyn dilka Suxufi Khashoggi ayaa sheegay inay xidheen 17 xubnood oo dilkaasi loo heysto, isla markaana shan kamid ah doonayaan in lagu soo oogo qisaas, iyagoo ku tilmaamay hawlgalkaasi mid si khaldan u dhacay. Waxayna sheegeen in kooxdaasi loo diray inay suxufiga soo afduubaan balse aysan qorshaha ahayn inay dilaan.
Dhinaca kale dowlada Turkiga ayaa dooda Sacuudiga ku sheegtay mid xaqiiqda ka fog, waxayna Turkiga soo bandhigeen xog dheeraad ah oo la xariirta qaabka dilka u dhacay oo muujineysa in dilkan si weyn loo soo qorsheeyey.
Kooxda dilka fulisay ayaa markii ay dileen Suxufi Khashoggi kadib ku dureen meydkiisa cirbad dhiig joojin ah si aan wax raad ah u reebin jirkiisa oo ay xubin xubin u jar jareen, waxayna qalabkaasi kala yimaadeen wadankooda. Donald Trump ayaa la filayaa inuu arrintan jawaab ka bixiyo iyadoo uu saacadaha soo socda ka dhageysan doono Saraakiisha sirdoonka CIA xogta ay soo diyaariyeen.